Koofurta Mudug oo ay ka socoto degaameyn loo sameeynayo barakacayaasha+ Sawirro – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Koofurta Mudug oo ay ka socoto degaameyn loo sameeynayo barakacayaasha+ Sawirro
Gaalkacyo-(SONNA)-Maamulka Gobolka Mudug ayaa wada qorshe dib u dejin loogu samaynayo Dadka barakacayaasha ah ee ku nool halkaasi, tallaabadaas oo ay iska kaashanayaan maamulka Galmudug iyo qaar ka mid ah hay’adaha samafalka.
Dadka barakacayaasha ah ee halkaasi ku dhaqan ayaa si weyn usoo dhoweeyay qorshahan, iyagoo sheegay in ay tahay fursad weyn oo dib usoo kabaysa xaaladdooda nololeed.
Saynab Cismaan Xasan oo ah Dadka u dhaq-dhaqaaqda Bulshada Rayidka Gobolka Mudug ayaa Wakaaladda SONNA u sheegtay in barakayaal badan oo anay tiradoodu xaddidneyn ay ku jiraan Xeryaha barayacayaasha, kuwaas oo badankood ku Xoolo waayay Abaarihiii Gobolka soo maray iminkana ay doonayaan in ay ugu faa’iideeyaan qorshaha degaamaynta ah.
Seynab ayaa sheegtay in ay si weyn uga damqanayaan dhibta haysata barakacayasha, ayna jecelyihiin in ay arkaaan iyaga oo u hoyanaya dhismayaal u wanaagsan noloshooda kana habboon meelaha ay deggan yihiin haatan, iyadoo intaa ku dartay in ay goobahooda ku heli doonaan baahiyahood gaarka ah.
Dowladda Soomaaliya ayey ka codsatay in kaalin mug leh ay kageysato degaameynta barakacayaasha, si gaar ahna ay ula socoto qorshahaan wax loogu qabanayo ee uu hormuudka ka yahay maamulka Gobolka Mudug.
Maamulka Degmada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa Dadka barakayaasha intooda badan dejiyey goobo kabaxsan Magaalada, si loogu diyaariyo in ay ka faa’iideystaan qorshahan cusub ee uu maamulku wado.
Qorshaha degaameynta Dadka barakacayaasha ah oo waqti dheer laga soo shaqeynayay ayaa wax weyn ka beddalaya daruufaha ay xilligaan ku jiraan Dadka Xeryaha ku jira, kuwaas oo haatan ku hoyda Guryo ka samaysan Cooshado aan celin karin Roobka, qabowga iyo Cadceedda.
Maxamed Siciid Soomaali
Madaxweyne Waare oo kulan la qaatay xubno ka tirsan Isxilqaamayaasha howlaha Gurmadka Fatahaadaha+Sawirro
Tababar ku saabsan habka Sharci qorista iyo kaydinta sharuucda dalka oo soo gabagaboobay
Dowladda Soomaaliya oo War ka soo saartay Ayax ku dagay qaar ka mid ah gobollada dalka